နရောတိုငျးမှာ သူ့မကျြနှာ – Federal Journal
ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံကို ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဩဂုတျလ (၇၊ ၈၊ ၉) ရကျနမြေ့ားတှငျ တိုငျးရငျးသား မြားအရေးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ တဈကွိမျတကျရောကျခဲ့ဖူးပါသညျ။ ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံ၏ မွို့ ကလေးတဈမွို့ဖွဈသော ဆီအမျရိဖျ (Siem Reap) မွို့တှငျ တညျးခိုခဲ့ရပါတယျ။ ကရငျပွညျနယျ ရှိ ကော့ကရိတျမွို့ သို့မဟုတျ အလှနျဆုံး ဘားအံမွို့သာသာလောကျသာရှိသညျ့ မွို့တဈမွို့ အဖွဈ ခနျ့မှနျးမိသညျ။ မွနျမာပွညျမှာကဲ့သို့ပငျ လမျးမြား သိပျမကောငျးလှ၊ ရောကျရှိခြိနျ ဩဂုတျလဆိုပမေယျ့ မိုးရှာသညျကို မတှေ့၊ ဖုနျမြားပငျ ထလိုကျသေးပါသညျ။ ဈေးဆိုငျကန်နား ကွီးမြားလညျး မတှရေ့ပါ။ တညျးခိုရသော Regency Angkor ဟိုတယျပငျ အတျောအသငျ့သာ ဖွဈသညျ။ သို့ရာတှငျ တဈခုတော့ ပွောစရာရှိသညျ။ မွနျမာပွညျရှိ မွို့ကလေးတိုငျး၏ လမျးကွို လမျးကွား၊ လမျးမကွီးအားလုံးလိုလို၌ တှရေ့တတျသော ခှေးလခှေေးလှငျ့မြား ထိုမွို့ရှိ လမျးမြား၌ မတှရေ့၊ တညျးခိုရာဟိုတယျရှိ လမျးမြား၌လညျးကောငျး၊ အခွားသှားလရော လမျးမြား၌လညျးကောငျး ခှေးတဈကောငျ မြှ မတှရေ့သညျမှာ မိမိအဖို့ အံ့ဩဖှယျ ဖွဈရ ပါသညျ။ ခှေးလခှေေးလှငျ့မြားကို ခမာ ပွညျသူမြား မညျသို့ ရှငျးလငျး သုတျသငျပဈ လိုကျသညျကို မမေးဖွဈသညျပငျ ကိုယျ့ကိုယျကို အပွဈ တငျမိသညျ။ ゞငျးတို့ ခှေးသားမစားကွောငျးကိုကား သိလိုကျရပါသညျ။
ထိုမွို့တှငျ တညျးခိုခှငျ့ပေးခွငျး၊ တညျးခိုစခွေငျး ၏ အဓိကအခကျြကို နောကျပိုငျးမှ သိရသညျ။ ထိုမွို့နှငျ့ရှဈမိုငျခနျ့မြှဝေးသော အနျကောဝပျ ဘုရား ကြောငျး တညျရှိရာဒသေ ဖွဈခွငျးကွောငျ့ဖွဈ သညျ။ သိရှိပွီးသားဖွဈကွပါလိမျ့မညျ။ ကမ်ဘောဒီးယား နိုငျငံ၏ အနျကောဝပျ (Angkor Wat) ဘုရားကြောငျး ကွီးသညျ ကမ်ဘာ့ယဉျကြေးမှုအမှအေနှဈ စာရငျးဝငျ အဆောကျ အဦတဈခုဖွဈပွီး လှနျခဲ့သော နှဈပေါငျး ရာခြီကတညျး က ကမ်ဘောဒီးယားဘုရငျမြား တညျဆောကျခဲ့သော ခိုငျခနျ့မာကြောသညျ့ အဆောကျ အဦးတဈခုဖွဈသညျ။
စာရေးသူတို့ သှားရောကျလလေ့ာခှငျ့ရသော နတှေ့ငျ ကမ်ဘာ့နိုငျငံအသီးသီးနှငျ့ပွညျတှငျးမှလာရောကျ လလေ့ာသူပေါငျး (ခနျ့မှနျး) ၅၀ဝ၀ ဦးရှိမညျထငျပါ သညျ။ လလေ့ာသူတဈဦးလြှငျ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၀ ပေး ဆောငျရပါသညျ။ ကမ်ဘောဒီး ယားငှေ (ကမ်ဘောဒီးယား ဒျေါလာ) နှငျ့ဆိုလြှငျ ၆၀ဝဝဝ ကသြငျ့ပါသညျ။ ကမ်ဘောဒီးယား ၏တနျဖိုး မိမိတို့နိုငျငံထကျ မြားစှာနိမျ့နကွေောငျး တှရေ့ပါ သညျ။ ထိုရရှိသောဝငျငှကေို ကမ်ဘောဒီးယားအစိုးရက အသုံး မပွုဘဲ ၂ ရာနှုနျးကိုသာ ဘုရား ကြောငျးကွီး အထှထှေေ ပွငျ ဆငျမှမျးမံစရိတျအဖွဈ အသုံး ပွုပွီး၊ ကနျြ ၈ ရာနှုနျးကို နိုငျငံ ဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျနှငျ့ ဆငျ ရဲ နှမျးပါးသူမြားသို့ ပေးဝေ လှူဒါနျးလိုကျသညျဟု သိရှိရပါ သညျ။ ကမ်ဘာ့ယဉျကြေးမှု အမှေ အနှဈစာရငျးဝငျ မွနျမာနိုငျငံ ပုဂံဒသေ၏ လလေ့ာရေးမှ ရရှိ သော ဝငျငှမြေားကို မညျသို့ အသုံးပွုကွောငျး မသိရှိရသျော လညျး ကမ်ဘောဒီးယား ၏အစီအမံမြားမှာ ဝမျးသာ ကွညျနူးနှဈလိုဖှယျကောငျး သညျဟု ခံစားမိပါသညျ။
စာရေးသူမထငျမှတျပါ။ မြှျောလညျးမမြှျောလငျ့ ထားပါ။ ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံကို သှားရောကျလလေ့ာ မညျ့ အဖှဲ့တဈဖှဲ့တှငျ ကရငျနိုငျငံရေးပါတီမြား၏ ကိုယျစားလှယျတဈဦးအဖွဈ ထပျမံရှေးခယျြခံရခွငျး ဖွဈပွီး ၂၀၁၆ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ (၂၅၊၂၆၊၂၇) ရကျနေ့ မြားတှငျ သှားရောကျခဲ့ခွငျးဖွဈပါသညျ။ လေးလခနျ့ သာကှာခွားပွီးနောကျ ဒုတိယအကွိမျ ကမ်ဘောဒီးယား သို့ သှားရောကျခှငျ့ ကွုံသဖွငျ့လညျး ဝမျးသာမိသညျ မြာ အမှနျပငျဖွဈသညျ။
ယခုအဖှဲ့တှငျ အဖှဲ့ဝငျ ၁၄ ဦးပါရှိပွီး အားလုံး ကရငျတိုငျးရငျးသားမြားသာဖွဈပါသညျ။ KNU ကရငျ အမြိုးသားအစညျးအရုံး၏ ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌနှငျ့ တှဲဘကျ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး -၂ အပါအဝငျ KNU ၏ နယျဘကျ စဈဘကျမှ ကိုယျစားလှယျ ၈ ဦး၊ သဘာဝပတျဝနျးကငျြထိနျး သိမျးရေး၊ ကရငျလူမှုအဖှဲ့ အစညျး၊ ကရငျဘာသာရေး အဖှဲ့အစညျး၊ ကရငျအမြိုးသမီး အဖှဲ့အစညျး၊ အမြိုးသားလှတျ တျောကိုယျ စားလှယျ တဈဦးစီ ပေါငျးငါးဦးနှငျ့ မိမိပါတီကိုယျ စားလှယျတဈဦး အားလုံး စုစု ပေါငျး ၁၄ ဦးဖွဈပါသညျ။
သညျတဈခါရောကျရှိ သညျ့ မွို့မှာ သီဟာနူဗီးလျ (Sihanouk Ville) မွို့ဖွဈပွိး သီဟာနူပွညျနယျ၏ မွို့တျော ဖွဈပါသညျ။ သညျမွို့ကို ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံ၏ ကှယျ လှနျသူမငျးသားကွီး (နောငျ ဘုရငျဖွဈလာသူ) နိုရိုဒှနျသီဟာ နူ၏ အထိမျးအမှတျအဖွဈ မှညျ့ချေါထားသောမွို့ဖွဈ သညျဟု နားလညျရပါသညျ။ ကမ်ဘော ဒီးယားနိုငျငံ၏ မငျးသားကွီး သီဟာနူကို မွနျမာပွညျ သူမြား မစိမျး၊ သိဘူး ကွားဖူးကွပွီးသားဖွဈမညျ ထငျပါသညျ။ သူ့ခတျေသူ့အခါတှငျ လှနျစှာဩဇာကွီး မားခဲ့ပါသညျ။ သို့ရာတှငျ ကမ်ဘောဒီးယား ခမာနီတို့၏ နှိပျကှပျတျော လှနျမှုဖွငျ့ မငျးသားကွီးသီဟာနူ ဒုက်ခ ပငျလယျဝခေဲ့ ရပွီး ရာထူးအာဏာစှနျ့ရသညျ့အနေ အထားရောကျ ခဲ့ရကွောငျး သူတို့၏ သမိုငျးက ဖျောပွပါသညျ။ သို့ရာ တှငျ ကမ်ဘောဒီးယား၏ ဘုရငျစနဈမှာ ဆကျလကျ တညျတံ့လကျြရှိပွီး ကမ်ဘာပျေါရှိ ဘုရငျစနဈ ရှိနသေေး သော နိုငျငံနညျးတူ စညျးမဉျြးခံဘုရငျစနဈသာ ဖွဈ ကွောငျးတှရှေိ့ရပါသညျ။ ယခုလကျရှိတှငျ သီဟာနူ၏ သားက ဘုရငျအဖွဈ ဆကျလကျအုပျစိုးလကျြရှိသျော လညျး တကယျ့အာဏာ ကိုငျစှဲထားသူမှာ ဝနျကွီးခြုပျ ဟှနျဆနျသာလြှငျဖွဈပါသညျ။
မိမိတို့၏ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ကို လှနျစှာကွီး ကယျြခမျးနားသညျ့ ကမျးခွဟေိုတယျတဈခုဖွဈသော (Sokha Beach Resort Hotel) တှငျ နရောခထြားပါသညျ။ တညျးခိုသူအဝငျအထှကျ ပြားပနျးခတျမြှ ရှုပျယှကျခတျေနသေညျ့ ဟိုတယျကွီးတဈခုဖွဈကာ ယခငျတဈခေါကျရောကျခဲ့ဖူးသညျ့ဟိုတယျနှငျ့ ဆီနှငျ့ ရလေို အဆမတနျ ကှာခွားလကျြရှိကွောငျး တှရှေိ့ရပါ သညျ။ အိပျခနျးပေါငျး ၅၀ဝ ကြျောရှိပွီး၊ ရကေူးကနျ၊ ကနျြးမာရေးလကေ့ငျြ့ဌာန၊ မီနီဘား (စားသောကျခနျး)၊ Spa ချေါ အနှိပျခနျး၊ ကာစီနိုလောငျးကစားရုံ၊ ဂိမျး ကစားသညျ့အခနျး၊ ကှနျပြူတာခနျး၊ စငျတငျတေးဂီတ၊ KTV ချေါ သီခငျြးဆိုခနျး၊ လဟာပွငျစားသောကျဆိုငျ (ပငျလယျဘကျသို့ ရှုစားငေးမြှျောရငျး) စသညျ စသညျ ဖွငျ့ ရငျနှငျ့အမြှ ခံစားရှငျမွူးဖှယျရာ စုံလငျလှသော ကမ်ဘောဒီးယားအမြိုးသားပိုငျ ဟိုတယျကွီးတဈခု ဖွဈ ပါသညျ။
မိမိတို့အုပျစုလလေ့ာရေးဆောငျရှကျနိုငျရနျ စပှနျဆာပေးသညျ့အဖှဲ့မှာ ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ပဋိပက်ခ ဖွဈစဉျမြားကို လလေ့ာဆနျးစဈသညျ့အဖှဲ့ (Center for Peace and Conflict Studies) ပငျဖွဈသညျ။ မိမိ အား KNU ၏ ကိုယျစားလှယျတဈဦးက ခြိတျဆကျ ဖိတျချေါခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး ကနဦး၌ ခရီးစဉျ၏ အသေးစိတျ အစီအစဉျကို မသိရှိခဲ့ရပေ။ ခရီးစဉျ၏ ပထမနေ့ (၂၅.၁၁.၂၀၁၉) ရကျနတှေ့ငျ တညျးခိုရာဟိုတယျ၌ CPCS (Center for Peace and Conflict Studies) ၏ ကမ်ဘောဒီးယားဌာနေ ကိုယျစားလှယျတဈဦးက ကမ်ဘော ဒီးယားနိုငျငံ၏ နိုငျငံရေးနှငျ့ ယဉျကြေးမှုအကွောငျး အရာအခြို့ကို နံနကျပိုငျးတှငျ ရှငျးလငျးပွောကွားပွီး မှနျးလှဲပိုငျးရောကျသောအခါ သီဟာနူဗီးလျပွညျနယျ၏ ပွညျနယျအုပျခြုပျရေးမှူးဆိုသူက ၎င်းငျးတို့၏မွို့၊ ၎င်းငျးတို့၏ ပွညျနယျ၌ ဆောငျရှကျနသေော စီးပှားဖှံ့ဖွိုး ရေး လုပျငနျးမြားအကွောငျး၊ အုပျခြုပျစီမံရေး အနေ အထားနှငျ့ နိုငျငံခွားရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြားအကွောငျး ကို အတျောမြားမြား ရှငျးလငျးပွောကွားသှားပါ သညျ။ ၎င်းငျးတို့နိုငျငံသညျ ပွငျသဈ၏ ကိုလိုနီနိုငျငံတဈခုဖွဈခဲ့ ဘူးသျောလညျး ယခုအခါ တရုတျနိုငျငံ၏ ရငျးနှီးမွှုပျနှံ ကို အမြားဆုံးရရှိထားလကျြ ရှိကွောငျး၊ မိမိတို့အစိုးရ ၏ ပျေါလစီမှာ တိုငျးပွညျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလြှငျပွီးရော မညျသူ့ဆီကဖွဈစေ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုကိုလကျခံမညျဖွဈ ကွောငျး၊ ပွဿနာမြားပျေါပေါကျလာနိုငျမညျဖွဈ သျောလညျး ဝိုငျးဝနျးဖွရှေငျးမညျဖွဈကွောငျး အကယျြ တဝငျ့ ရှငျးလငျးသှားပါသညျ။ မိမိတို့ ကိုယျစားလှယျ မြား၊ အထူးသဖွငျ့ မိမိ၏ သူတို့နိုငျငံ၏ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ တိုးတကျဖှံ့ဖွိုးမှုအား ဦးစားပေးသညျ့အနအေထားကို စောဒကမတကျလိုသျောလညျး နိုငျငံသူ၊ နိုငျငံသား မြားကို စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ပကျြစီးယိုယှငျးနိုငျမှု၊ လူမှု ရေးခြို့ယှငျးနိမျ့ကသြှားနိုငျမှု၊ လိငျအကွမျးဖကျမှုမြား၊ မူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲမှုမြား၊ လောငျးကစားကိစ်စမြား၊ စသညျ့ဆိုးကြိုးမြားကို မညျသို့ထညျ့သှငျးစဉျးစားထား ပါသနညျးဟူသညျ့ မေးခှနျးကို အကွောငျး ကွောငျး ကွောငျ့ မမေးဖွဈလိုကျပေ။
နောကျတဈရကျ (၂၆-၁၁-၂၀၁၉)နေ့၊ နံနကျ ပိုငျးတဈပိုငျးလုံး ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံမှ တကျကွှလှုပျ ရှားသူ အသကျ ၅၀ နှဈဝနျးကငျြခနျ့ရှိ အမြိုးသမီးတဈ ဦးက မိမိတို့အဖှဲ့အား ယမနျနကေ့ ရှငျးလငျးတငျပွ ခဲ့သညျ့ ပွညျနယျအုပျခြုပျရေးမှူးဆိုသူနှငျ့ ဆနျ့ကငျြ သော အမွငျမြားကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး လာရောကျ ရှငျးလငျးသှားပါသညျ။ ထိုအမြိုးသမီး၏ ရှငျးပွခကျြ အရ သီဟာနူဗီးလျမွို့တှငျ တရုတျ၏ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု သညျ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှသာ စတငျခဲ့သျောလညျး ယခု ၂၀၁၉ ခုနှဈ၌ တဈမွို့လုံးတရုတျလကျရာ အဆောကျ အဦးမြား အလငျြအမွနျပျေါပေါကျလာကွောငျး၊ အဆောကျအဦးမြားမှာ အနိမျ့ဆုံး ၈ ထပျမှ အမွငျ့ဆုံး အထပျ ၄၀ အထိရှိကွောငျး၊ အငျဂငျြနီယာမြားအပါ အဝငျ အလုပျသမားအမြားစုသညျ တရုတျလူမြိုးမြား ဖွဈပွီး ခမာလူမြိုးမြားမှာ လစာအနညျးငယျသာရ သော အောကျခွလေုပျငနျးမြား၌သာ လုပျကိုငျကွရ ကွောငျး၊ မွို့ပွတိုကျတာအဆောကျအဦး၊ ရုပျဒွပျလငျြ မွနျစှာ ဖှံ့ဖွိုးပျေါပေါကျရေးကိုသာ ဦးတညျသဖွငျ့ ယခု ၂ နှဈကြျော ၃ သုံးနှဈအတှငျး တဈမွို့လုံး အထပျ မွငျ့တိုကျတာ အဆောကျအဦးမြား ပွညျ့လြှံနပွေီဖွဈ ကွောငျး၊ တရုတျနိုငျငံသားပိုငျနှငျ့ ခမာနိုငျငံသား ပိုငျဆိုငျမှုအခြိုးအစားမှာ ကာစီနိုရုံတှငျ တရုတျ ရာနှုနျး ပွညျ့၊ ဟိုတယျတှငျ တရုတျ ၈၀ ရာနှုနျး၊ ခမာ ၂၀ ရာ နှုနျး၊ Spa ချေါ အနှိပျခနျးနှငျ့ KTV ချေါတေးဂီတခနျး မြားလုပျငနျးတှငျ တရုတျတို့ကသာ ရာနှုနျးပွညျ့နီးပါး ပိုငျဆိုငျပွီး ခမာမြား၏ပိုငျဆိုငျမှု မရှိသလောကျ ဖွဈပါ ကွောငျး၊ မွို့လယျခေါငျအခကျြအခြာဒသေမြားတှငျ တရုတျလူမြိုးအမြားစုနထေိုငျပွီး ခမာတို့မှာ မွို့နီးခြုပျ စပျအစှနျအဖြားသို့ ရောကျရှိနထေိုငျကွရကွောငျး၊ ဤ မွို့နေ လူဦးရေ လေးသိနျး အနကျ တရုတျ -နှဈသိနျး နှငျ့ ခမာလူမြိုး နှဈသိနျးရှိကွောငျး၊ ဤသို့ တရုတျမွို့ (China Town) အဖွဈ သီဟာနူ ဗီးလျမွို့အား ဖနျတီးလာသညျကို မိမိတို့စောငျ့ ကွညျ့ရေးအဖှဲ့မှ စောငျ့ကွညျ့ နကွေောငျး၊ လိငျအကွမျးဖကျ မှု၊ ခိုးဆိုးတိုကျခိုကျမှု၊ မူးယဈ ဆေးဝါးသုံးစှဲမှု၊ ယဉျကြေးမှုနှငျ့ လူမှုရေးခြို့ယှငျးနိမျ့ပါးသှားမှု စသညျတို့ကို ယမနျနေ့ ပွညျ နယျ အုပျခြုပျရေးမှူးနှငျ့ဆနျ့ ကငျြဘကျ တငျပွသှားသညျကို တှရှေိ့ရပါသညျ။
ထိုနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ CPCS အဖှဲ့မှ တာဝနျရှိသူမြားက မိမိတို့ကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့အား အစုသုံးစု ခှဲ၍ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ပျေါပေါကျ လာဖှယျရှိသညျ့ တရုတျတို့၏ လှမျးမိုးခယျြလှယျမှု၊ တရုတျတို့၏ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု၊ တရုတျတို့၏ နရော တကာတိုငျး၌ ပါဝငျပတျသကျမှု၊ တရုတျမွို့ (China Town)တညျဆောကျလိုမှု စသညျတို့ကို ဝဖေနျ သုံးသပျစခေဲ့ပါသညျ။
(၂၇.၁၁.၂၀၁၉) ရကျနတှေ့ငျ ဟိုတယျမှ နံနကျစာ (Breakfast) သုံးဆောငျအပွီး CPCS မှ စီစဉျ ပေးသော Mini Bus တဈစီးဖွငျ့ နံနကျပိုငျးတဈပိုငျး လုံး တဈမွို့လုံးလလေ့ာရနျ ထှကျခှာလာကွသညျ။ ဆောကျလကျစ အဆောကျအဦးမြားအတှကျ တပျဆငျ ထားသော ကရိနျးကွီးမြားနရော (၂၀) ခနျ့တှရေ့ သညျ။ အဆောကျအဦမြားကို နီးကပျစှာ ဆောကျ လုပျထားခွငျးဖွဈပွီး ကာစီနို၊ KTV/Spa ဆိုငျးဘုတျ မြား အစီရီတနျးစီလြှကျရှိနသေညျကို တှရေ့ပါသညျ။ အဆောကျအဦမြား ဆောကျလုပျနဆေဲဖွဈ၍လား မသိ.. လမျးမြားမှာ ကစဉျ့ကလြားဖွဈနပွေီး ပွနျ့ပွူး ညီညာမှုမရှိပါ။ တဈမွို့လုံးတှငျ ဆေးရုံနှငျ့ ဆေးပေး ခနျး ၇ နရောခနျ့သာရှိပွီး အားလုံး တရုတျနိုငျငံသား မြားပိုငျသညျဟု သိရှိရသညျ။ စာသငျကြောငျးနှငျ့ အားကစားကှငျးမြားကိုလညျးမတှရေ့ပါ။ အစိုးရ အဆောကျအဦးမြား မတှေ့ ရသလောကျဖွဈနသေညျ။ တဈနရောတှငျ ဝငျးကယျြ ကွီးတဈခုအတှငျး သပျရပျ ခနျ့ညားထညျဝါ ကွီးကယျြ လှစှာသော အိမျတဈလုံးကို တှရေ့သညျ။ ဝနျကွီးခြုပျဟှနျ ဆနျ၏ အိမျဟု လိုကျလံ ပို့ ဆောငျသူက ရှငျးပွသညျ။ သကျတျောရှညျသညျ ဝနျကွီး ခြုပျအတှကျ တရုတျတို့က မွို့ကွီးတဈမွို့တှငျ အိမျတဈလုံးစီ ဆောကျပေးသညျဟု ဆကျလကျပွောပွ သညျ။ ဪသျာ…. တရုတျ၏ဩဇာ၊ တရုတျ၏ ပါဝါ အာဏာလှမျးမိုးမှုဒဏျမခံနိုငျရခွငျးမှာ ဒါ့ကွောငျ့လား ဟု တှေးထငျမိသညျ။ စာရှုသူမြားအနဖွေငျ့လညျး ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံရှိ မွို့နှဈမွို့၏ အနအေထားကို ရိပျစားမိလောကျပွီ ထငျပါသညျ။
အားလုံးသိကွပွီးဖွဈသညျ့အတိုငျး မွနျမာနိုငျငံ တှငျ တရုတျတို့၏ ခြိတျဆကျမှုမြားဖွငျ့ ဆောငျရှကျခဲ့ သောကွေးနီတောငျစီမံကိနျး၊ မွဈဆုံစီမံကိနျး ယာယီ ရပျဆိုငျးထားသျောလညျး ရခိုငျမှ တရုတျအထိ သှယျ တနျးထားသော ဓာတျငှပေို့ကျလိုငျးစီမံကိနျးမှာ အကောငျအထညျပျေါခဲ့ပွီး နိုငျငံတျောအတှကျ မညျ ရှမေ့ညျမြှ အကြိုးသကျရောကျမှုရှိသညျကို သာမနျ ပွညျသူမြားမသိနိုငျပါ။ ငွိမျးခမျြးရေးကိစ်စတှငျလညျး တရုတျတို့ ထဲထဲဝငျဝငျ ပါဝငျနကွေောငျး တဈစှနျးတဈစ သာ သိရှိရပါသညျ။
မိမိတို့ အစုဖှဲ့သုံးဖှဲ့ဖွဈသညျ့ ကရငျလကျနကျ ကိုငျမြားအဖှဲ့၊ ကရငျနိုငျငံရေးပါတီနှငျ့လှတျတျောကိုယျ စားလှယျအဖှဲ့၊ ကရငျလူမူရေးနှငျ့ဘာသာရေးအဖှဲ့တို့ သညျ မိမိတို့ ကမ်ဘောဒီးယားခရီးစဉျ၏ တကယျ့ ရညျရှယျခကျြကို ယခုမှသာ ကှကျကှကျကှငျးကှငျး သိရှိလာရပါသညျ။ လလေ့ာရေးအဖှဲ့တှငျ ကရငျ မြားသာ (အထူးသဖွငျ့ ကရငျပွညျနယျအတှငျးမှ ကရငျ မြားသာ) ပါဝငျသညျမှာ ကရငျပွညျနယျ၊ မွဝတီမွို့ နယျ၊ ရှကေုက်ကိုလျမွိုငျ ကြေးရှာတှငျ အကောငျအထညျ ဖျောမညျ့ မွို့တျောစီမံကိနျးအတှကျ နှိုငျးယှဉျသုံးသပျ သငျ့လြှျောလြှောကျပတျသညျ့ အကွံဉာဏျမြားပေး နိုငျရနျ ဖွဈကွောငျးသိရှိလာရပါသညျ။ ရှကေုက်ကိုလျမွိုငျ ကြေးရှာကို အဆငျ့မွငျ့နညျးပညာမွို့ (High Technology Smart City)အဖွဈ ဖျောထုတျ တညျဆောကျရနျ ခဈြလငျးမွိုငျကုမ်ပဏီနှငျ့ Julian Yatai International Company တို့က မွနျမာ့ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုကျောမတီ MIC တှငျ လကျမှတျရေးထိုးမှတျပုံတငျခဲ့ပွီး MIC (Myanmar Investment Committe) ၏ ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ လုပျငနျးစတငျဆောငျရှကျခဲ့ကွပါသညျ။ MIC ၏ ခှငျ့ပွု ခကျြတှငျ မွေ (၆၂) ဧက၌သာ ကနဦးအမရေိကနျ ဒျေါလာ သနျး (၅၀ဝ) ဖွငျ့ လုပျငနျး စတငျရနျဖွဈ ကွောငျး၊ ကရငျပွညျနယျအစိုးရလညျး သိရှိကွောငျး သကျသခေံလကျမှတျရေးထိုးထားသညျ့ဟု ကွားသိ ရပါသညျ။ နောကျပိုငျးတှငျ ဧကပေါငျး ၂၉၆၅၂.၆ ဧက အထိ တိုးခြဲ့ဆောငျရှကျရနျလညျး အစီအစဉျရှိကွောငျး ပွောဆိုနကွေပါသညျ။ သာမနျပွညျသူတဈယောကျ အနဖွေငျ့ ဤကိစ်စမှနျမမှနျ တပျအပျသခြောစှာ မသိ နိုငျပါ။ သိသာထငျရှားသညျ့တဈနမှေ့ာ BGF တပျဖှဲ့ပိုငျ ခဈြလငျးမွိုငျကုမ်ပဏီနှငျ့ ဤလုပျငနျးကို ခြိတျဆကျ ရသညျ့အကွောငျးရငျးကို ပွညျသူတှေ မသိရှိရခွငျး ဖွဈပါသညျ။ မွို့တညျထောငျမညျကို ဒသေခံမြား မကွိုကျပါက မကနျ့ကှကျနိုငျအောငျ သို့မဟုတျ မကနျ့ ကှကျရဲအောငျ နယျခွားစောငျ့တပျကို လုပျပိုငျခှငျ့ပေး လိုကျခွငျးလော … KNU ၏ ထိပျပိုငျးခေါငျးဆောငျ မြားပငျဤကိစ်စကို ဂဃနဏ မသိရှိလိုကျရပါ။ အစိုးရ နှငျ့သာ သကျဆိုငျပွီး KNU ၏ကိစ်စမဟုတျ၍ သိရနျ မလိုဟုလညျး သဘောထားကောငျးထားပါလိမျ့မညျ။
မညျသို့ပငျဖွဈစေ၊ စာခြုပျခြုပျဆိုလုပျငနျး အကောငျအထညျဖျောပွီးဖွဈ၍ မိမိတို့ဝဖေနျထောကျ ပွနိုငျစရာအကွောငျး မမွငျတော့ပါ။ မိမိတို့၏ဆန်ဒကို တငျပွမတ်ေတာရပျခံရုံသာ ရှိပါတော့သညျ။ သို့ရာတှငျ NCA စာခြုပျ၌ စီမံကိနျးကွီးမြားကို အကောငျအထညျ ဖျောမညျဆိုပါက နှဈဖကျညှိနှိုငျးပွီးမှ ဆောငျရှကျရနျ ဟူသော သဘောတူညီခကျြရှိပါသညျ။ ပွီးခဲ့သော အခြိနျကာလအနညျးငယျခနျ့က မွဝတီမွို့တှငျ တရုတျ မြားရမျးကား၍ အရေးယူဆောငျရှကျခဲ့ရသညျ့သတငျး၊ ဆိုငျမြားတှငျ တရုတျစာသားပါသောဆိုငျးဘုတျမြား ကို ဖွုတျသိမျးလိုကျခွငျး စသညျ့အခွအေနမြေားပျေါ ပေါကျခဲ့ပါသညျ။ မန်တလေးမွို့သညျ တရုတျမွို့ဖွဈနေ ပွီ … ရနျကုနျတှငျ အသဈဖျောထုတျမညျ့ မွို့သဈ စီမံကိနျးဒသေမြား၌လညျး တရုတျတှေ မွအေမြား အပွား ဝယျယူထားပွီးပွီဟု ပွောဆိုနကွေပါသညျ။ မွဝတီမွို့နှငျ့ ရှကေုက်ကိုလျမွိုငျကြေးရှာတို့တှငျလညျး တရုတျတှေ မညျရှမေ့ညျမြှ ရောကျရှိနထေိုငျပွီးဖွဈ သညျ ..စသညျ စသညျဖွငျ့ သတငျးမြိုးစုံထှကျနသေညျ။ထို့အပွငျ စီးပှားရေးနယျပယျမြား၌လညျး တရုတျတိုပ နရောယူမှုမြားစှာရှိသညျသာမက ICJ တရားရုံးသို့ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံမထှကျခှာမီကလေးတှငျ တရုတျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး လာရောကျတှဆေုံ့ခဲ့ပုံ၊ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ တရုတျအာဏာ ပိုငျမြား မကွာခဏထိတှဆေ့ကျဆံပွီး လကျပှနျးတတီး ရှိနကွေပုံ၊ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျမွောကျပိုငျး အဖှဲ့မြားကလညျး တရုတျနှငျ့ပလဲနံပသငျ့နကွေပုံမြား ကိုမိမိတို့ကွားသိနရေသညျ။ နရောတကာတှငျ တရုတျ တှကွေီးစိုးလှမျးမိုးနပွေီလား…
ဟော …အခု မွဝတီမွို့ သောငျရငျးကမျးပါး တဈလြှောကျတှငျ ကာစီနိုလောငျးကစားရုံမြား တညျ ဆောကျထားကွသညျ။ ရှကေုက်ကိုလျတှငျလညျး တညျ ဆောကျနသေညျဟု သိရသညျ။ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့မြား၏ ဩဇာအရှိနျအဝါကို ရယူ တညျဆောကျကွသညျဟုဆိုကွသညျ။ မွဝတီမှနေ၍ ရှကေုက်ကိုလျသို့ အလှယျတကူသှားနိုငျအောငျ လမျး ဖောကျဦးမညျဟုလညျး ကွားသိရသညျ။ ပွညျထောငျစု လှတျတျောမှ ပွငျဆငျအတညျပွုလိုကျသော လောငျး ကစားဥပဒတှေငျ ကာစီနိုမပါသဖွငျ့ ကာစီနိုရုံမြားကို ပွောငျပွောငျတငျးတငျး ဖှငျ့လှဈကစားနကွေသလော … မညျသူ၏ သဘောတူညီခကျြ၊ မညျသူ့အမိနျ့ဖွငျ့ ဖှငျ့လှဈသညျဖွဈစေ … ဥပဒနှေငျ့အညီ ဖွဈသငျ့သညျ မဟုတျပါလော ….။
(၇.၁.၂၀၂၀) ရကျနေ့ နံနကျတှငျ ဖစျေ့ဘှတျ ဖှငျ့ကွညျ့ရာ၌ အောကျပါကွျောငွာတဈခုကို တှရေ့ပါ သညျ။
လစာ-ဘတျ (၉၀ဝဝ)မှ ဘတျ (၁၂၀ဝဝ)
ရကျမှနျကွေး -ဘတျ (၁၀ဝဝ)
မွဝတီမွို့ရှိ ကာစီနိုရုံတဈရုံမှ ကွျောငွာဟု သိရ သညျ။ မကျမောလောကျသညျ့ လုပျခလစာပငျဖွဈပါ သညျ။ လုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးပေးနိုငျ၍လညျး ဝမျးသာကွိုဆိုသငျ့ပါသညျ။ သို့ရာတှငျ ဤဆှဲဆောငျ မှုနောကျကှယျ၌ ကွုံတှလေ့ာရဖှယျရှိသော ဘဝ၏ အနိဋ်ဌာရုံမြားကို သတိပွုသငျ့သညျ။ ဤလုပျငနျး အောငျမွငျဖွဈထှနျးလာပါက ကွီးပှားတိုးတကျ စီးပှား ဖွဈမညျ့သူမညျသူဖွဈမညျနညျး …. နိုငျငံတျောလား.. အဖှဲ့အစညျးတဈရပျလား … တဈဦးတဈယောကျတညျး လား …သို့မဟုတျ မရှိဆငျးရဲသား၊ နိုငျငံသူနိုငျငံသား မြားအတှကျလား …ရှညျရှညျဝေးဝေး ခငျြ့ခြိနျဝဖေနျ သုံးသပျကွရပါမညျ။
ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံ၊ သီဟာနူဗီးလျမွို့ကဲ့သို့ နခေ့ငျြးညခငျြး တိုကျတာအဆောကျအဦပျေါလာ၊ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာတိုးတကျဖွဈထှနျးမှု ထငျသာမွငျသာ ရှိသျောလညျး မမွငျနိုငျစှမျးသညျ့ လူမှုရေး၊ ယဉျကြေးမှု၊ အကငျြ့စာရိတ်တ ဆုတျယုတျပကျြစီးမှုမြားကို ကွီးစှာ သောသတိသံဝဂေတရားထားရှိရနျ လိုအပျမညျဖွဈပါ သညျ။ နရောတိုငျးမှာ သူ့လကျသူ့ခွေ၊ နရောတိုငျးမှာ သူ၏ လှမျးမိုးခယျြလှယျပါဝငျပတျသကျမှု၊ နရောတိုငျး မှာ တရုတျတို့၏ မကျြနှာကိုမျောကွညျ့နရေမှုမှ ကငျး ဝေးရနျလိုအပျပါကွောငျး မီးမောငျးထိုးပွလိုကျရပါ သညျ။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၇၊ ၈၊ ၉) ရက်နေ့များတွင် တိုင်းရင်းသား များအရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်ကြိမ်တက်ရောက်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ မြို့ ကလေးတစ်မြို့ဖြစ်သော ဆီအမ်ရိဖ် (Siem Reap) မြို့တွင် တည်းခိုခဲ့ရပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ် ရှိ ကော့ကရိတ်မြို့ သို့မဟုတ် အလွန်ဆုံး ဘားအံမြို့သာသာလောက်သာရှိသည့် မြို့တစ်မြို့ အဖြစ် ခန့်မှန်းမိသည်။ မြန်မာပြည်မှာကဲ့သို့ပင် လမ်းများ သိပ်မကောင်းလှ၊ ရောက်ရှိချိန် ဩဂုတ်လဆိုပေမယ့် မိုးရွာသည်ကို မတွေ့၊ ဖုန်များပင် ထလိုက်သေးပါသည်။ ဈေးဆိုင်ကန္နား ကြီးများလည်း မတွေ့ရပါ။ တည်းခိုရသော Regency Angkor ဟိုတယ်ပင် အတော်အသင့်သာ ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် တစ်ခုတော့ ပြောစရာရှိသည်။ မြန်မာပြည်ရှိ မြို့ကလေးတိုင်း၏ လမ်းကြို လမ်းကြား၊ လမ်းမကြီးအားလုံးလိုလို၌ တွေ့ရတတ်သော ခွေးလေခွေးလွင့်များ ထိုမြို့ရှိ လမ်းများ၌ မတွေ့ရ၊ တည်းခိုရာဟိုတယ်ရှိ လမ်းများ၌လည်းကောင်း၊ အခြားသွားလေရာ လမ်းများ၌လည်းကောင်း ခွေးတစ်ကောင် မျှ မတွေ့ရသည်မှာ မိမိအဖို့ အံ့ဩဖွယ် ဖြစ်ရ ပါသည်။ ခွေးလေခွေးလွင့်များကို ခမာ ပြည်သူများ မည်သို့ ရှင်းလင်း သုတ်သင်ပစ် လိုက်သည်ကို မမေးဖြစ်သည်ပင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ် တင်မိသည်။ ゞင်းတို့ ခွေးသားမစားကြောင်းကိုကား သိလိုက်ရပါသည်။
ထိုမြို့တွင် တည်းခိုခွင့်ပေးခြင်း၊ တည်းခိုစေခြင်း ၏ အဓိကအချက်ကို နောက်ပိုင်းမှ သိရသည်။ ထိုမြို့နှင့်ရှစ်မိုင်ခန့်မျှဝေးသော အန်ကောဝပ် ဘုရား ကျောင်း တည်ရှိရာဒေသ ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ် သည်။ သိရှိပြီးသားဖြစ်ကြပါလိမ့်မည်။ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ၏ အန်ကောဝပ် (Angkor Wat) ဘုရားကျောင်း ကြီးသည် ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် စာရင်းဝင် အဆောက် အဦတစ်ခုဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ရာချီကတည်း က ကမ္ဘောဒီးယားဘုရင်များ တည်ဆောက်ခဲ့သော ခိုင်ခန့်မာကျောသည့် အဆောက် အဦးတစ်ခုဖြစ်သည်။
စာရေးသူတို့ သွားရောက်လေ့လာခွင့်ရသော နေ့တွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးနှင့်ပြည်တွင်းမှလာရောက် လေ့လာသူပေါင်း (ခန့်မှန်း) ၅၀ဝ၀ ဦးရှိမည်ထင်ပါ သည်။ လေ့လာသူတစ်ဦးလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ ပေး ဆောင်ရပါသည်။ ကမ္ဘောဒီး ယားငွေ (ကမ္ဘောဒီးယား ဒေါ်လာ) နှင့်ဆိုလျှင် ၆၀ဝ၀ဝ ကျသင့်ပါသည်။ ကမ္ဘောဒီးယား ၏တန်ဖိုး မိမိတို့နိုင်ငံထက် များစွာနိမ့်နေကြောင်း တွေ့ရပါ သည်။ ထိုရရှိသောဝင်ငွေကို ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရက အသုံး မပြုဘဲ ၂ ရာနှုန်းကိုသာ ဘုရား ကျောင်းကြီး အထွေထွေ ပြင် ဆင်မွမ်းမံစရိတ်အဖြစ် အသုံး ပြုပြီး၊ ကျန် ၈ ရာနှုန်းကို နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်နှင့် ဆင် ရဲ နွမ်းပါးသူများသို့ ပေးဝေ လှူဒါန်းလိုက်သည်ဟု သိရှိရပါ သည်။ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေ အနှစ်စာရင်းဝင် မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂံဒေသ၏ လေ့လာရေးမှ ရရှိ သော ဝင်ငွေများကို မည်သို့ အသုံးပြုကြောင်း မသိရှိရသော် လည်း ကမ္ဘောဒီးယား ၏အစီအမံများမှာ ဝမ်းသာ ကြည်နူးနှစ်လိုဖွယ်ကောင်း သည်ဟု ခံစားမိပါသည်။
စာရေးသူမထင်မှတ်ပါ။ မျှော်လည်းမမျှော်လင့် ထားပါ။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကို သွားရောက်လေ့လာ မည့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင် ကရင်နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအဖြစ် ထပ်မံရွေးချယ်ခံရခြင်း ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၅၊၂၆၊၂၇) ရက်နေ့ များတွင် သွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လေးလခန့် သာကွာခြားပြီးနောက် ဒုတိယအကြိမ် ကမ္ဘောဒီးယား သို့ သွားရောက်ခွင့် ကြုံသဖြင့်လည်း ဝမ်းသာမိသည် မျာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
ယခုအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင် ၁၄ ဦးပါရှိပြီး အားလုံး ကရင်တိုင်းရင်းသားများသာဖြစ်ပါသည်။ KNU ကရင် အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွဲဘက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး -၂ အပါအဝင် KNU ၏ နယ်ဘက် စစ်ဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ် ၈ ဦး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေး၊ ကရင်လူမှုအဖွဲ့ အစည်း၊ ကရင်ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်း၊ ကရင်အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်း၊ အမျိုးသားလွှတ် တော်ကိုယ် စားလှယ် တစ်ဦးစီ ပေါင်းငါးဦးနှင့် မိမိပါတီကိုယ် စားလှယ်တစ်ဦး အားလုံး စုစု ပေါင်း ၁၄ ဦးဖြစ်ပါသည်။
သည်တစ်ခါရောက်ရှိ သည့် မြို့မှာ သီဟာနူဗီးလ် (Sihanouk Ville) မြို့ဖြစ်ပြိး သီဟာနူပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဖြစ်ပါသည်။ သည်မြို့ကို ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ကွယ် လွန်သူမင်းသားကြီး (နောင် ဘုရင်ဖြစ်လာသူ) နိုရိုဒွန်သီဟာ နူ၏ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မှည့်ခေါ်ထားသောမြို့ဖြစ် သည်ဟု နားလည်ရပါသည်။ ကမ္ဘော ဒီးယားနိုင်ငံ၏ မင်းသားကြီး သီဟာနူကို မြန်မာပြည် သူများ မစိမ်း၊ သိဘူး ကြားဖူးကြပြီးသားဖြစ်မည် ထင်ပါသည်။ သူ့ခေတ်သူ့အခါတွင် လွန်စွာဩဇာကြီး မားခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကမ္ဘောဒီးယား ခမာနီတို့၏ နှိပ်ကွပ်တော် လှန်မှုဖြင့် မင်းသားကြီးသီဟာနူ ဒုက္ခ ပင်လယ်ဝေခဲ့ ရပြီး ရာထူးအာဏာစွန့်ရသည့်အနေ အထားရောက် ခဲ့ရကြောင်း သူတို့၏ သမိုင်းက ဖော်ပြပါသည်။ သို့ရာ တွင် ကမ္ဘောဒီးယား၏ ဘုရင်စနစ်မှာ ဆက်လက် တည်တံ့လျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘုရင်စနစ် ရှိနေသေး သော နိုင်ငံနည်းတူ စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်သာ ဖြစ် ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် သီဟာနူ၏ သားက ဘုရင်အဖြစ် ဆက်လက်အုပ်စိုးလျက်ရှိသော် လည်း တကယ့်အာဏာ ကိုင်စွဲထားသူမှာ ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်သာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို လွန်စွာကြီး ကျယ်ခမ်းနားသည့် ကမ်းခြေဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သော (Sokha Beach Resort Hotel) တွင် နေရာချထားပါသည်။ တည်းခိုသူအဝင်အထွက် ပျားပန်းခတ်မျှ ရှုပ်ယှက်ခေတ်နေသည့် ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ကာ ယခင်တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ဖူးသည့်ဟိုတယ်နှင့် ဆီနှင့် ရေလို အဆမတန် ကွာခြားလျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါ သည်။ အိပ်ခန်းပေါင်း ၅၀ဝ ကျော်ရှိပြီး၊ ရေကူးကန်၊ ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ဌာန၊ မီနီဘား (စားသောက်ခန်း)၊ Spa ခေါ် အနှိပ်ခန်း၊ ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၊ ဂိမ်း ကစားသည့်အခန်း၊ ကွန်ပျူတာခန်း၊ စင်တင်တေးဂီတ၊ KTV ခေါ် သီချင်းဆိုခန်း၊ လဟာပြင်စားသောက်ဆိုင် (ပင်လယ်ဘက်သို့ ရှုစားငေးမျှော်ရင်း) စသည် စသည် ဖြင့် ရင်နှင့်အမျှ ခံစားရွှင်မြူးဖွယ်ရာ စုံလင်လှသော ကမ္ဘောဒီးယားအမျိုးသားပိုင် ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ် ပါသည်။
မိမိတို့အုပ်စုလေ့လာရေးဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စပွန်ဆာပေးသည့်အဖွဲ့မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်များကို လေ့လာဆန်းစစ်သည့်အဖွဲ့ (Center for Peace and Conflict Studies) ပင်ဖြစ်သည်။ မိမိ အား KNU ၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ချိတ်ဆက် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကနဦး၌ ခရီးစဉ်၏ အသေးစိတ် အစီအစဉ်ကို မသိရှိခဲ့ရပေ။ ခရီးစဉ်၏ ပထမနေ့ (၂၅.၁၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် တည်းခိုရာဟိုတယ်၌ CPCS (Center for Peace and Conflict Studies) ၏ ကမ္ဘောဒီးယားဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ကမ္ဘော ဒီးယားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း အရာအချို့ကို နံနက်ပိုင်းတွင် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး မွန်းလွဲပိုင်းရောက်သောအခါ သီဟာနူဗီးလ်ပြည်နယ်၏ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆိုသူက ၎င်းတို့၏မြို့၊ ၎င်းတို့၏ ပြည်နယ်၌ ဆောင်ရွက်နေသော စီးပွားဖွံ့ဖြိုး ရေး လုပ်ငန်းများအကြောင်း၊ အုပ်ချုပ်စီမံရေး အနေ အထားနှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအကြောင်း ကို အတော်များများ ရှင်းလင်းပြောကြားသွားပါ သည်။ ၎င်းတို့နိုင်ငံသည် ပြင်သစ်၏ ကိုလိုနီနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ ဘူးသော်လည်း ယခုအခါ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ကို အများဆုံးရရှိထားလျက် ရှိကြောင်း၊ မိမိတို့အစိုးရ ၏ ပေါ်လစီမှာ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျှင်ပြီးရော မည်သူ့ဆီကဖြစ်စေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလက်ခံမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ပြဿနာများပေါ်ပေါက်လာနိုင်မည်ဖြစ် သော်လည်း ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း အကျယ် တဝင့် ရှင်းလင်းသွားပါသည်။ မိမိတို့ ကိုယ်စားလှယ် များ၊ အထူးသဖြင့် မိမိ၏ သူတို့နိုင်ငံ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအား ဦးစားပေးသည့်အနေအထားကို စောဒကမတက်လိုသော်လည်း နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသား များကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးယိုယွင်းနိုင်မှု၊ လူမှု ရေးချို့ယွင်းနိမ့်ကျသွားနိုင်မှု၊ လိင်အကြမ်းဖက်မှုများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများ၊ လောင်းကစားကိစ္စများ၊ စသည့်ဆိုးကျိုးများကို မည်သို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားထား ပါသနည်းဟူသည့် မေးခွန်းကို အကြောင်း ကြောင်း ကြောင့် မမေးဖြစ်လိုက်ပေ။
နောက်တစ်ရက် (၂၆-၁၁-၂၀၁၉)နေ့၊ နံနက် ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံး ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ တက်ကြွလှုပ် ရှားသူ အသက် ၅၀ နှစ်ဝန်းကျင်ခန့်ရှိ အမျိုးသမီးတစ် ဦးက မိမိတို့အဖွဲ့အား ယမန်နေ့က ရှင်းလင်းတင်ပြ ခဲ့သည့် ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆိုသူနှင့် ဆန့်ကျင် သော အမြင်များကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လာရောက် ရှင်းလင်းသွားပါသည်။ ထိုအမျိုးသမီး၏ ရှင်းပြချက် အရ သီဟာနူဗီးလ်မြို့တွင် တရုတ်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှသာ စတင်ခဲ့သော်လည်း ယခု ၂၀၁၉ ခုနှစ်၌ တစ်မြို့လုံးတရုတ်လက်ရာ အဆောက် အဦးများ အလျင်အမြန်ပေါ်ပေါက်လာကြောင်း၊ အဆောက်အဦးများမှာ အနိမ့်ဆုံး ၈ ထပ်မှ အမြင့်ဆုံး အထပ် ၄၀ အထိရှိကြောင်း၊ အင်ဂျင်နီယာများအပါ အဝင် အလုပ်သမားအများစုသည် တရုတ်လူမျိုးများ ဖြစ်ပြီး ခမာလူမျိုးများမှာ လစာအနည်းငယ်သာရ သော အောက်ခြေလုပ်ငန်းများ၌သာ လုပ်ကိုင်ကြရ ကြောင်း၊ မြို့ပြတိုက်တာအဆောက်အဦး၊ ရုပ်ဒြပ်လျင် မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးပေါ်ပေါက်ရေးကိုသာ ဦးတည်သဖြင့် ယခု ၂ နှစ်ကျော် ၃ သုံးနှစ်အတွင်း တစ်မြို့လုံး အထပ် မြင့်တိုက်တာ အဆောက်အဦးများ ပြည့်လျှံနေပြီဖြစ် ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်နှင့် ခမာနိုင်ငံသား ပိုင်ဆိုင်မှုအချိုးအစားမှာ ကာစီနိုရုံတွင် တရုတ် ရာနှုန်း ပြည့်၊ ဟိုတယ်တွင် တရုတ် ၈၀ ရာနှုန်း၊ ခမာ ၂၀ ရာ နှုန်း၊ Spa ခေါ် အနှိပ်ခန်းနှင့် KTV ခေါ်တေးဂီတခန်း များလုပ်ငန်းတွင် တရုတ်တို့ကသာ ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး ပိုင်ဆိုင်ပြီး ခမာများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိသလောက် ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ မြို့လယ်ခေါင်အချက်အချာဒေသများတွင် တရုတ်လူမျိုးအများစုနေထိုင်ပြီး ခမာတို့မှာ မြို့နီးချုပ် စပ်အစွန်အဖျားသို့ ရောက်ရှိနေထိုင်ကြရကြောင်း၊ ဤ မြို့နေ လူဦးရေ လေးသိန်း အနက် တရုတ် -နှစ်သိန်း နှင့် ခမာလူမျိုး နှစ်သိန်းရှိကြောင်း၊ ဤသို့ တရုတ်မြို့ (China Town) အဖြစ် သီဟာနူ ဗီးလ်မြို့အား ဖန်တီးလာသည်ကို မိမိတို့စောင့် ကြည့်ရေးအဖွဲ့မှ စောင့်ကြည့် နေကြောင်း၊ လိင်အကြမ်းဖက် မှု၊ ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်မှု၊ မူးယစ် ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူမှုရေးချို့ယွင်းနိမ့်ပါးသွားမှု စသည်တို့ကို ယမန်နေ့ ပြည် နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ဆန့် ကျင်ဘက် တင်ပြသွားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ထိုနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် CPCS အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများက မိမိတို့ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား အစုသုံးစု ခွဲ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပေါ်ပေါက် လာဖွယ်ရှိသည့် တရုတ်တို့၏ လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်မှု၊ တရုတ်တို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တရုတ်တို့၏ နေရာ တကာတိုင်း၌ ပါဝင်ပတ်သက်မှု၊ တရုတ်မြို့ (China Town)တည်ဆောက်လိုမှု စသည်တို့ကို ဝေဖန် သုံးသပ်စေခဲ့ပါသည်။
(၂၇.၁၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ဟိုတယ်မှ နံနက်စာ (Breakfast) သုံးဆောင်အပြီး CPCS မှ စီစဉ် ပေးသော Mini Bus တစ်စီးဖြင့် နံနက်ပိုင်းတစ်ပိုင်း လုံး တစ်မြို့လုံးလေ့လာရန် ထွက်ခွာလာကြသည်။ ဆောက်လက်စ အဆောက်အဦးများအတွက် တပ်ဆင် ထားသော ကရိန်းကြီးများနေရာ (၂၀) ခန့်တွေ့ရ သည်။ အဆောက်အဦများကို နီးကပ်စွာ ဆောက် လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကာစီနို၊ KTV/Spa ဆိုင်းဘုတ် များ အစီရီတန်းစီလျှက်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်နေဆဲဖြစ်၍လား မသိ.. လမ်းများမှာ ကစဉ့်ကလျားဖြစ်နေပြီး ပြန့်ပြူး ညီညာမှုမရှိပါ။ တစ်မြို့လုံးတွင် ဆေးရုံနှင့် ဆေးပေး ခန်း ၇ နေရာခန့်သာရှိပြီး အားလုံး တရုတ်နိုင်ငံသား များပိုင်သည်ဟု သိရှိရသည်။ စာသင်ကျောင်းနှင့် အားကစားကွင်းများကိုလည်းမတွေ့ရပါ။ အစိုးရ အဆောက်အဦးများ မတွေ့ ရသလောက်ဖြစ်နေသည်။ တစ်နေရာတွင် ဝင်းကျယ် ကြီးတစ်ခုအတွင်း သပ်ရပ် ခန့်ညားထည်ဝါ ကြီးကျယ် လှစွာသော အိမ်တစ်လုံးကို တွေ့ရသည်။ ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန် ဆန်၏ အိမ်ဟု လိုက်လံ ပို့ ဆောင်သူက ရှင်းပြသည်။ သက်တော်ရှည်သည် ဝန်ကြီး ချုပ်အတွက် တရုတ်တို့က မြို့ကြီးတစ်မြို့တွင် အိမ်တစ်လုံးစီ ဆောက်ပေးသည်ဟု ဆက်လက်ပြောပြ သည်။ ဪသာ်…. တရုတ်၏ဩဇာ၊ တရုတ်၏ ပါဝါ အာဏာလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်မခံနိုင်ရခြင်းမှာ ဒါ့ကြောင့်လား ဟု တွေးထင်မိသည်။ စာရှုသူများအနေဖြင့်လည်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ မြို့နှစ်မြို့၏ အနေအထားကို ရိပ်စားမိလောက်ပြီ ထင်ပါသည်။
အားလုံးသိကြပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ တွင် တရုတ်တို့၏ ချိတ်ဆက်မှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ သောကြေးနီတောင်စီမံကိန်း၊ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ယာယီ ရပ်ဆိုင်းထားသော်လည်း ရခိုင်မှ တရုတ်အထိ သွယ် တန်းထားသော ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းမှာ အကောင်အထည်ပေါ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်အတွက် မည် ရွေ့မည်မျှ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကို သာမန် ပြည်သူများမသိနိုင်ပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွင်လည်း တရုတ်တို့ ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်နေကြောင်း တစ်စွန်းတစ်စ သာ သိရှိရပါသည်။
မိမိတို့ အစုဖွဲ့သုံးဖွဲ့ဖြစ်သည့် ကရင်လက်နက် ကိုင်များအဖွဲ့၊ ကရင်နိုင်ငံရေးပါတီနှင့်လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်အဖွဲ့၊ ကရင်လူမူရေးနှင့်ဘာသာရေးအဖွဲ့တို့ သည် မိမိတို့ ကမ္ဘောဒီးယားခရီးစဉ်၏ တကယ့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ယခုမှသာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း သိရှိလာရပါသည်။ လေ့လာရေးအဖွဲ့တွင် ကရင် များသာ (အထူးသဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှ ကရင် များသာ) ပါဝင်သည်မှာ ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့ နယ်၊ ရွှေကုက္ကိုလ်မြိုင် ကျေးရွာတွင် အကောင်အထည် ဖော်မည့် မြို့တော်စီမံကိန်းအတွက် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ် သင့်လျှော်လျှောက်ပတ်သည့် အကြံဥာဏ်များပေး နိုင်ရန် ဖြစ်ကြောင်းသိရှိလာရပါသည်။ ရွှေကုက္ကိုလ်မြိုင် ကျေးရွာကို အဆင့်မြင့်နည်းပညာမြို့ (High Technology Smart City)အဖြစ် ဖော်ထုတ် တည်ဆောက်ရန် ချစ်လင်းမြိုင်ကုမ္ပဏီနှင့် Julian Yatai International Company တို့က မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ MIC တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး MIC (Myanmar Investment Committe) ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ MIC ၏ ခွင့်ပြု ချက်တွင် မြေ (၆၂) ဧက၌သာ ကနဦးအမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း (၅၀ဝ) ဖြင့် လုပ်ငန်း စတင်ရန်ဖြစ် ကြောင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရလည်း သိရှိကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်ဟု ကြားသိ ရပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဧကပေါင်း ၂၉၆၅၂.၆ ဧက အထိ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန်လည်း အစီအစဉ်ရှိကြောင်း ပြောဆိုနေကြပါသည်။ သာမန်ပြည်သူတစ်ယောက် အနေဖြင့် ဤကိစ္စမှန်မမှန် တပ်အပ်သေချာစွာ မသိ နိုင်ပါ။ သိသာထင်ရှားသည့်တစ်နေ့မှာ BGF တပ်ဖွဲ့ပိုင် ချစ်လင်းမြိုင်ကုမ္ပဏီနှင့် ဤလုပ်ငန်းကို ချိတ်ဆက် ရသည့်အကြောင်းရင်းကို ပြည်သူတွေ မသိရှိရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြို့တည်ထောင်မည်ကို ဒေသခံများ မကြိုက်ပါက မကန့်ကွက်နိုင်အောင် သို့မဟုတ် မကန့် ကွက်ရဲအောင် နယ်ခြားစောင့်တပ်ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေး လိုက်ခြင်းလော … KNU ၏ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် များပင်ဤကိစ္စကို ဂဃနဏ မသိရှိလိုက်ရပါ။ အစိုးရ နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး KNU ၏ကိစ္စမဟုတ်၍ သိရန် မလိုဟုလည်း သဘောထားကောင်းထားပါလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ပြီးဖြစ်၍ မိမိတို့ဝေဖန်ထောက် ပြနိုင်စရာအကြောင်း မမြင်တော့ပါ။ မိမိတို့၏ဆန္ဒကို တင်ပြမေတ္တာရပ်ခံရုံသာ ရှိပါတော့သည်။ သို့ရာတွင် NCA စာချုပ်၌ စီမံကိန်းကြီးများကို အကောင်အထည် ဖော်မည်ဆိုပါက နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးမှ ဆောင်ရွက်ရန် ဟူသော သဘောတူညီချက်ရှိပါသည်။ ပြီးခဲ့သော အချိန်ကာလအနည်းငယ်ခန့်က မြဝတီမြို့တွင် တရုတ် များရမ်းကား၍ အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည့်သတင်း၊ ဆိုင်များတွင် တရုတ်စာသားပါသောဆိုင်းဘုတ်များ ကို ဖြုတ်သိမ်းလိုက်ခြင်း စသည့်အခြေအနေများပေါ် ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ မန္တလေးမြို့သည် တရုတ်မြို့ဖြစ်နေ ပြီ … ရန်ကုန်တွင် အသစ်ဖော်ထုတ်မည့် မြို့သစ် စီမံကိန်းဒေသများ၌လည်း တရုတ်တွေ မြေအများ အပြား ဝယ်ယူထားပြီးပြီဟု ပြောဆိုနေကြပါသည်။ မြဝတီမြို့နှင့် ရွှေကုက္ကိုလ်မြိုင်ကျေးရွာတို့တွင်လည်း တရုတ်တွေ မည်ရွေ့မည်မျှ ရောက်ရှိနေထိုင်ပြီးဖြစ် သည် ..စသည် စသည်ဖြင့် သတင်းမျိုးစုံထွက်နေသည်။ထို့အပြင် စီးပွားရေးနယ်ပယ်များ၌လည်း တရုတ်တိုပ နေရာယူမှုများစွာရှိသည်သာမက ICJ တရားရုံးသို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံမထွက်ခွာမီကလေးတွင် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပုံ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တရုတ်အာဏာ ပိုင်များ မကြာခဏထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လက်ပွန်းတတီး ရှိနေကြပုံ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်မြောက်ပိုင်း အဖွဲ့များကလည်း တရုတ်နှင့်ပလဲနံပသင့်နေကြပုံများ ကိုမိမိတို့ကြားသိနေရသည်။ နေရာတကာတွင် တရုတ် တွေကြီးစိုးလွှမ်းမိုးနေပြီလား…
ဟော …အခု မြဝတီမြို့ သောင်ရင်းကမ်းပါး တစ်လျှောက်တွင် ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများ တည် ဆောက်ထားကြသည်။ ရွှေကုက္ကိုလ်တွင်လည်း တည် ဆောက်နေသည်ဟု သိရသည်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ ဩဇာအရှိန်အဝါကို ရယူ တည်ဆောက်ကြသည်ဟုဆိုကြသည်။ မြဝတီမှနေ၍ ရွှေကုက္ကိုလ်သို့ အလွယ်တကူသွားနိုင်အောင် လမ်း ဖောက်ဦးမည်ဟုလည်း ကြားသိရသည်။ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှ ပြင်ဆင်အတည်ပြုလိုက်သော လောင်း ကစားဥပဒေတွင် ကာစီနိုမပါသဖြင့် ကာစီနိုရုံများကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဖွင့်လှစ်ကစားနေကြသလော … မည်သူ၏ သဘောတူညီချက်၊ မည်သူ့အမိန့်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်သည်ဖြစ်စေ … ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြစ်သင့်သည် မဟုတ်ပါလော ….။
(၇.၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက်တွင် ဖေ့စ်ဘွတ် ဖွင့်ကြည့်ရာ၌ အောက်ပါကြော်ငြာတစ်ခုကို တွေ့ရပါ သည်။
လစာ-ဘတ် (၉၀ဝ၀)မှ ဘတ် (၁၂၀ဝ၀)
ရက်မှန်ကြေး -ဘတ် (၁၀ဝ၀)
မြဝတီမြို့ရှိ ကာစီနိုရုံတစ်ရုံမှ ကြော်ငြာဟု သိရ သည်။ မက်မောလောက်သည့် လုပ်ခလစာပင်ဖြစ်ပါ သည်။ လုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေးနိုင်၍လည်း ဝမ်းသာကြိုဆိုသင့်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဤဆွဲဆောင် မှုနောက်ကွယ်၌ ကြုံတွေ့လာရဖွယ်ရှိသော ဘဝ၏ အနိဋ္ဌာရုံများကို သတိပြုသင့်သည်။ ဤလုပ်ငန်း အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းလာပါက ကြီးပွားတိုးတက် စီးပွား ဖြစ်မည့်သူမည်သူဖြစ်မည်နည်း …. နိုင်ငံတော်လား.. အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လား … တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း လား …သို့မဟုတ် မရှိဆင်းရဲသား၊ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား များအတွက်လား …ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ချင့်ချိန်ဝေဖန် သုံးသပ်ကြရပါမည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ သီဟာနူဗီးလ်မြို့ကဲ့သို့ နေ့ချင်းညချင်း တိုက်တာအဆောက်အဦပေါ်လာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု ထင်သာမြင်သာ ရှိသော်လည်း မမြင်နိုင်စွမ်းသည့် လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အကျင့်စာရိတ္တ ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးမှုများကို ကြီးစွာ သောသတိသံဝေဂတရားထားရှိရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါ သည်။ နေရာတိုင်းမှာ သူ့လက်သူ့ခြေ၊ နေရာတိုင်းမှာ သူ၏ လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်ပါဝင်ပတ်သက်မှု၊ နေရာတိုင်း မှာ တရုတ်တို့၏ မျက်နှာကိုမော်ကြည့်နေရမှုမှ ကင်း ဝေးရန်လိုအပ်ပါကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ရပါ သည်။